Shirweynihii 6-aad ee Caalamiga ah ee ku saabsan barashada VIETNAMESE - Qaybta 2 - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
… Loo sii waday Qeybta 1 - cusbooneysiinta…
Mawduucyada diirada lagu saaray shirka
Topics oo diiradda saarey shirka ka hooseeya 10 Guddi waa sida soo socota:
Arimaha Gobolka iyo Caalamka
Xaaladda gobolka iyo tan caalamiga ah
+ Amarka siyaasadeed iyo amni ee adduunka, Bariga Aasiya iyo Indo-Pacific-ga: xaaladda taagan iyo aragtida;
+ Tartanada awoodaha waaweyn, gaar ahaan tartanka istiraatiijiyadeed ee Mareykanka - Shiinaha: sida ay hadda tahay, aragtida iyo saameynta ay kuyeelaneyso Ka taagnaayeen colaado sababay, gobolka iyo adduunka;
+ Caqabadaha xagga dhaqanka iyo kuwa aan caadiga ahayn ee amniga gobolka iyo adduunkaba;
+ Maamul goboleed iyo caalami, doorka qaab dhismeedyada heer gobol iyo caalami ee xaalada cusub.
Xiriirka arrimaha dibedda ee Viet Nam
+ Istaraatiijiyadda Dibadda ee Vietnam iyo siyaasadeeda: Guulaha, fursadaha, caqabadaha iyo xalka;
+ Ka taagnaayeen colaado sababay iyo ASEAN;
+ Xiriirka Vietnam Nam oo leh awood weyn (ie Mareykanka, Shiinaha, Hindiya, Jabbaan, iwm.);
+ Vietnam Nam oo ah mid qoto dheer oo balaaran oo heer gobol iyo caalami ah iyo isdhexgal;
+ Ka taagnaayeen colaado sababay iyo doorka ay ku leedahay maamulka gobolka iyo adduunka.
Status quo ee daraasaadka caalamiga ah ee aqoonyahanada Vietnam iyo cilmi baaris ku saabsan xiriirka xiriirka dibedda ee Vietnam iyo aqoonyahanno ajnabi ah.
Fiyatnaamiisku waxay ka fikirayeen dhaqan ahaan ilaa waqtiga casriga ah
+ Tusmada, dabeecada iyo astaamaha dhaqanka Vietnamese fikir;
+ Xiriirka ka dhexeeya Vietnamese fikradaha iyo diimaha taariikhda;
+ Saamaynta fikradaha soo jireenka ah iyo diimaha Dhaqanka Fiyatnaamiiska iyo dadka maanta;
+ Isbedelada fikirka adduunka iyo saameynta ay ku leeyihiin Vietnam;
+ Arimaha laxiriira cilmi baarista Fikirka Fiyatnaamiis adduunka maanta.
Siyaasada Fiyatnaamiis laga bilaabo Doimoi ilaa hada
+ Codsiga Marxism- Leninism in Ka taagnaayeen colaado sababay inta lagu jiro Nidaamka Doi moi;
+ Xiriirrada waaweyn ee Geedi socodka Doimoi;
+ Arimaha xisbiga talada haya Vietnam;
+ Doorka ka hantiwadaagga Gobolka dadka, dadka iyo dadka;
+ Arimaha laxiriira maaraynta bulshada, cadaalada bulshada, horumarka bulshada, is afgarad bulsho iyo wadajirka bulshada.
Daraasaadka Qoomiyadaha iyo Diinta
+ Arimaha qowmiyadeed ee horumarka waara ee qowmiyadaha iyo hirgelinta midnimo qaran oo weyn;
+ Hirgalinta siyaasadaha qowmiyadeed iyo horumarka waara ee qowmiyadaha;
+ Doorka kooxaha qowmiyadaha dalka iyo bulshada dibedda Vietnamese hawsha dhismaha Beesha-dhalasho ee reer Fiitnaam;
+ Qiyamka dhaqameed ee kooxaha qowmiyadaha iyo dhismaha dhaqan qaran oo mideysan Ka taagnaayeen colaado sababay kala duwanaanshaha jira;
+ Isbadalka hab-nololeedka, bulshada, dhaqanka, deegaanka, iwm iyo horumar waara oo ay helaan qowmiyadaha hada jira;
+ Arrimo cusub oo ku saabsan bulshooyinka qowmiyadeed-diimeed ee casriga ah Ka taagnaayeen colaado sababay.
+ Diimaha iyo isbadalka diinta ee Ka taagnaayeen colaado sababay macnaha cusub;
+ Isdhexgalka ka dhexeeya dhinacyada diinta iyo kuwa aan diinta ku xirneyndhaqaalaha, bulshada, dhaqanka, sharciga, waxbarashada iyo deegaanka) ee casriga ah Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Kooxo diimeed cusub oo soo ifbaxaya, asal ahaan asal ahaan diimaha ka soo dhex muuqday Ka taagnaayeen colaado sababay maanta;
+ Soo nooleynta Diimaha dadyowga iyo isbeddellada soo ifbaxaya;
+ Xiriirka-diinta ee gobolka Ka taagnaayeen colaado sababay taariikhda iyo waqtigan xaadirka ah.
Waxbarashada, Tababarka iyo Horumarinta Aadanaha ee Vietnam
+ Hay'adaha iyo siyaasadaha lagu horumarinayo waxbarashada iyo tababarka Ka taagnaayeen colaado sababay marka la eego dhaqaalaha suuqa iyo is-dhexgalka caalamiga ah, iyadoo la qaadanayo tayada iyo waxtarka wax-soo-saarka oo cabir ahaan loo qaato;
+ Tacliinta iyo tabobarka oo ay la socdaan sayniska iyo teknolojiyadda ayaa ah kuwa halbawlaha u ah horumarka dhaqan-dhaqaale;
+ Wax-ku-oolnimada iyo wax-ku-oolka maareynta gobolka, maareynta xirfadeed iyo maamulka waxbarashada iyo tababarka ee ku wajahan is-maamul hoosaad la xiriira la xisaabtanka hay'adaha waxbarashada iyo tababarka;
+ Istaraatiijiyad iskaashi caalami ah iyo is dhexgalka waxbarashada iyo tababarka si markaa Ka taagnaayeen colaado sababay noqon doona waddan xoog leh xagga waxbarashada iyo tababarka gobolka, la jaanqaadaya heerka adduunka ee horumarsan, ka qayb qaadanaya suuqa caalamiga ah ee tababarka shaqaalaha;
+ Waxbarid iyo tababar loogu talagalay kicinta caadooyinka wadaninimada, hanka qaran, aaminsanaanta, iyo himilooyinka barwaaqo iyo farxad horumarinta Vietnam Nam;
+ Waxbarid iyo tababar si kor loogu qaado wacyiga, ixtiraamka iyo u hogaansanaanta sharciga, ilaalinta deegaanka, loo ilaaliyo aqoonsiga dhaqanka qaran ee Dadka Fiyatnaamiiska, gaar ahaan jiilka soo koraya;
+ Horumarinta aadanaha oo dhameystiran Vietnam Nam si tartiib tartiib ah u noqonaysa xarunta istiraatiijiyadda horumarinta dhaqan-dhaqaale;
+ In la horumariyo Dadka Fiyatnaamiiska si guud, si ay u yeeshaan caafimaad, karti, aqoon, wacyigelin iyo masuuliyad sare oo xagga nafahooda, qoysaskooda, bulshada iyo qarankaba ah;
+ Kobcinta hibada, caqliga iyo tayada Dadka Fiyatnaamiiska waa xarunta, himilada iyo xoogga wadista howlaha qaranka;
+ Tilmaanta Horumarka Aadanaha (HDI) iyo arimaheeda kujira Ka taagnaayeen colaado sababay maanta;
+ Nidaamka qiimaha qaranka, nidaamka qiimaha dhaqanka iyo heerarka aadanaha waa aasaaska horumarka waxbarashada iyo tababarka iyo horumarka aadanaha Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Kor u qaad dhererka Dadka Fiyatnaamiiska iyada oo loo marayo waxbarashada aqoonta, anshaxa, bilicsanaanta, xirfadaha nolosha iyo barashada jimicsiga;
+ Siyaasad heer sare ah oo lagu soo jiito laguna qaddariyo hibada iyo khubarada heer qaran iyo caalami ahaanba.
Dhaqaalaha, Teknolojiyada iyo Deegaanka
+ Isdhexgalka dhaqaalaha iyo dayactirka (Doimoi) Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Guul dhaqaale oo istiraatiiji ah marka laga hadlayo xaaladda cusub ee horumarka;
+ Hagaajinta tartanka Ganacsiyada Vietnam habka isdhexgalka adduunka iyo tartanka;
+ Dib-u-habeynta dhaqaalaha iyo cusbooneysiinta qaabka koritaanka;
+ Isbadalka dhaqaalaha dhijitaalka ah iyo kobaca loo dhanyahay ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Ka faa'iideysiga Warshadaha 4.0 fursadaha lagu hagaajinayo doorka sayniska, tikniyoolajiyadda iyo hal-abuurnimada horumarka dhaqan-dhaqaale;
+ Kobcinta iyo dhameystirka hay’ada dhaqaalaha suuq galka ku dhisan ee hantiwadaagga;
+ Horumarinta magaalooyinka, horumarinta dhaqaalaha gobolka, iyo horumarka cusub ee miyiga;
+ Ka taagnaayeen colaado sababay iyo jiilka cusub ee heshiisyada ganacsiga xorta ah (EVFTA, CPTPP);
+ Horumarinta dhaqaalaha ee laxiriira ilaalinta deegaanka iyo ka jawaab celinta isbedelka cimilada ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Ujawaabida kan Covid-19 masiibada, ka dib markiilabo gool”In lala dagaallamo aafada iyo horumarinta dhaqaalaha xaalad cusub oo caadi ah;
+ Horumarinta dhaqaalaha bada waara ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Maareyn wax ku ool ah iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah, ilaalinta deegaanka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada;
+ Hirgelinta Vietnam Nam ee Himilooyinka Horumarka Sare (SDGs) hoosta UN 2030 Ajandaha Horumar waara.
+ Codsiga aragtiyaha cusub ee luqadeed ee adduunka ee barashada Luqada vietnam iyo luqadaha laga tirada badan yahay;
+ The Luqada vietnam iyada oo ku hoos jirta saamaynta warshadaynta, casriyeynta, magaalaynta, hijrada iyo isdhexgalka caalamiga ah;
+ Xiriirka ka dhexeeya luqadda iyo dhaqanka, barashada astaamaha dhaqanka - fikirka qaran ee lagu muujiyey luqadda;
+ Ilaalinta daahirnimada iyo horumarka Luqada vietnam iyadoo lala kaashanayo jaangooyooyinka Vietnamese marka la eego isdhexgalka caalamiga ah iyo Kacaanka 4.0;
+ Dhawridda iyo kor u qaadista doorarka iyo aqoonsiyada luqadaha laga tirada badan yahay si ay gacan uga geystaan ​​horumarka waara ee dalka ee xaaladda cusub;
+ Ku takhasusay afafka, barashada luuqadaha ee iskuulada, barid Vietnamese oo ah luqad shisheeye, iwm marka laga hadlayo isdhexgalka caalamiga ah.
+ Ku darsiga Suugaanta Vietnamese (laga bilaabo suugaanta dadwaynaha illaa suugaanta casriga ah; suugaanta gudaha iyo suugaanta dibedda ee Vietnamese) habka dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta;
+ Suugaanta qowmiyadaha tirada yar: geedi socodka horumarka, qorayaasha, isbadalada muuqda; xiriirka qowmiyadeed; aqoonsiga dhaqanka, isdhexgalka dhaqanka iyo suugaanta, iwm.
+ Isdhexgalka caalamiga ah iyo aqoonsiga qaran ee Suugaanta Vietnamese (Saamaynta ay ku yeelaneyso caalamiyeynta suugaanta, is weydaarsiga dhaqanka iyo suugaanta; arrimaha dhismaha dabeecadda iyo nafta sidata aqoonsiga Vietnamese, iwm.);
+ Suugaanta la tarjumay: geedi socodka horumarka; suuq loogu talagalay suugaanta la tarjumay, isweydaarsiga suugaanta iyo kor u qaadista; ku dhaqanka iyo siyaasada; iwm
+ Codsiga aragtiyaha casriga ah iyo qaababka loo galay Suugaanta Vietnamese cilmi baaris (saamaynta casriga iyo casrigii dambe);
+ Barashada suugaanta ee warshadaha 4.0 xilli.
Gobolka iyo Shuruucda
+ Dhisida sharciga-hantiwadaagga Gobolka Vietnam Nam; Abaabulka, jimicsiga, iyo xakamaynta awoodda Dawladda; Doorka iyo shaqooyinka sharciga Gobolka Vietnam Nam; Caalami ahaanta iyo qaaska u ah xukunka-sharciga Gobolka Vietnam Nam;
+ Maamulka gobolka ee Ka taagnaayeen colaado sababay xagga shuruudaha is-dhexgalka caalamiga ah iyo horumar waara;
+ Xiriirka Muwaadiniinta Gobolka iyo kaqeybgalka dadweynaha ee Arimaha Gobolka in Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Maamulka bulshada ee xaaladaha aan caadiga ahayn iyo kuwa bulshada ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Shuruucda ku saabsan isdhexgalka caalamiga ah iyo ilaalinta qaranimada marka la eego isdhexgalka caalamiga;
+ Kaalinta Vietnam Nam dejinta iyo hirgelinta ballanqaadyada caalamiga ah;
+ Aqoonsiga sharciga iyo socdaalka sharciyada shisheeyaha ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Shuruucda kor loogu qaadayo koritaanka cagaaran iyo horumar waara;
+ Iskaashiga caalamiga ah ee ka hortagga dambiyada;
+ Madaniga, qoyska iyo guurka, sharciyada nidaamka madaniga ah ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Sharciyada nidaamka ciqaabta iyo ciqaabta ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Shuruucda maalgashiga, ganacsiga iyo ganacsiga Ka taagnaayeen colaado sababay marka la eego isdhexgalka caalamiga ah iyo horumarka waara;
+ Shuruucda ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo ka jawaab celinta isbedelka cimilada ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Shuruucda shaqada iyo amniga bulshada ee Ka taagnaayeen colaado sababay marka la eego isdhexgalka caalamiga ah iyo horumarka waara;
+ Saamaynta sharciga ee Abaabulka Afaraad ee Warshadaha.
Taariikhda, Sino- Nom, Archaeology
+ Arimaha Vietnam ee taariikhda bilow ilaa pre-Doimoi dhinacyada siyaasadda, militariga, dhaqaalaha, diblomaasiyadda, dhaqanka iyo bulshada;
+ Arimaha Vietnam ee taariikhda ka Doimoi si loo soo bandhigo.
+ Horumarro cusub oo ku Daraasadaha Sino-Nom;
+ Ka faa'ideysiga dibada Diiwaanada Sino-Nom, Dukumintiyada Sino-Nom oo ay weheliso cilmiga aadanaha;
+ Qalabka Sino-Nom iyo barashada Bariga Aasiya qoraallada classical;
+ Sino-Nom ee Dhaqanka casriga ah ee Vietnam iyo tabarucaadka Sino-Nom muhiim u ah barashada Taariikhda Fiyatnaamiis iyo dhaqanka.
+ Soo helitaan cusub oo qadiimiga ah Ka taagnaayeen colaado sababay.
+ Arimaha guud ee guud Dhaqanka Fiyatnaamiiska marka la eego isdhexgalka iyo horumarka: siyaasadaha dhaqanka, aragtiyaha, habab, habab cilmi baaris dhaqameed marka lagu jiro xaalada isdhexgalka caalamiga ah iyo horumarka;
+ Dhaqannada bulshada, gobolka iyo qowmiyadeed ee hadda jira: ku dhaqanka dhaqanka qoyska, abtirsiinta, bulshada, ciidaha, caqiidooyinka, farshaxanka, aqoonta, iwm;
+ Dib-u-habeynta dhaqanka, isbeddelka iyo la qabsiga gudaha Ka taagnaayeen colaado sababay marka la eego isbedelada firfircoon ee ay keeneen isdhexgalka iyo horumarka;
+ Doorka dhaqanka ee isdhexgalka iyo horumarka waara: Sida dhaqankoodu u yahay il muhiim ah oo ilbaxnimo ku leh isdhexgalka iyo geedi socodka horumarka waara;
+ Warshadaha dhaqanka iyo hal abuurka ee Ka taagnaayeen colaado sababay;
+ Ku dhaqanka hidaha dhaqanka, dhowrista iyo kor u qaadista hidaha iyo dhaqanka dhexgalka macnaha guud ee is dhexgalka iyo horumarka Ka taagnaayeen colaado sababay maanta, xiriirka ka dhexeeya ilaalinta dhaxalka iyo horumarka, inta udhaxeysa qoritaanka hidaha iyo caqabadaha si loo ilaaliyo loona hormariyo hidaha, iwm.
+ Qaab dhismeedka bulshada ee Viet Nam iyo isweydaarsiga isbeddelka dhaqan-dhaqaale: samaynta fasalo bulsheed; dhaqdhaqaaqa bulshada; sinaan la’aanta iyo kala duwanaanshaha bulshada;
+ Socdaalka iyo magaalaynta: foomamka socdaalka; xaaladaha nolosha iyo tayada, xiriirka bulshada, tabarucaadka dhaqaale ee soogalootiga; carruurta qoysaska muhaajiriinta ah; magaalaynta iyo aagagga xaafadaha;
+ Horumarinta reer miyiga: isbedelka hab-nololeedka, isbeddelka dhaqanka ee qaab nololeedka miyiga, isbeddelka isticmaalka dhulka, dhismaha miyiga cusub;
+ Tirada dadka iyo horumarka waara: Isbedelka qaabdhismeedka dadka, heerka bacriminta; saamiga galmada dhalashada; la qabsiga da'da dadka; siyaasadda dadweynaha ee xilligii is-dhexgalka;
+ Qoyska iyo Jinsiga kala guurka: guurka iyo furitaanka bulshada casriga ah; isbedelka xiriirka qoyska, xiriirka lamaanaha; kala duwanaanta noocyada cusub ee qoyska; qoysaska laga tirada badan yahay; doorka qoyska;
+ Amniga bulshada iyo shaqada bulshada: saboolnimada miyiga, magaalooyinka, qowmiyadaha laga tirada badan yahay; maadooyinka daryeelka; helitaanka adeegyada bulshada; wuxuu u shaqeeyaa iyo hab nololeedka kooxaha danyarta ah; moodooyinka amniga bulshada; tababarka iyo tababarka shaqada bulshada;
+ Maareynta bulshada ee geeddi-socodka horumarinta iyo is-dhexgalka: moodellada maareynta, qaababka, agabka iyo cabirrada bulsheed ee la xiriira; kalsoonida bulshada;
+ Daryeelka caafimaadka: daryeelka caafimaadka taranka, caafimaadka maskaxda, rabshadaha qoyska, helitaanka daryeelka caafimaadka iyo badbaadada cuntada;
+ Arimaha bulshada ee isbadalka dhijitaalka ah: Saamaynta bulshada ee isbadalka dhijitaalka iyo 4.0 Kacaankii Warshadaha; isbeddelka dhijitaalka ah ee dhinacyada shaqada, shaqada, waxbarashada, iyo daryeelka caafimaadka; Arrimaha teori iyo wax ku ool ah ee bulshada digital.
ARAG SIDOO KALE :
◊ Shirweynihii 6-aad ee Caalamiga ah ee ku saabsan barashada VIETNAMESE - Qeybta 1.
(Booqday jeer 86, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 133
← Shirweynihii 6-aad ee Caalamiga ah ee ku saabsan barashada VIETNAMESE - Qeybta 1
Beesha DAO oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Comments Off on the DAO Community of 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Beesha HA NHI ee 54 qowmiyadeed ee Fiyatnaam
Comments Off on Beesha HA NHI oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah